Gumaysiga Itoobiya iyo dhoohnaanta Soomaalida | Voice Of Somalia
Posted on May 27, 2016 by Voice Of Somalia Image
Walaalayaal waxaynu in badan maqalaa dad Soomaaliyeed oo odhanhaya tigreega hada Itoobiya xukuma wuu ka fiicanyahay ama ka duwan yahay xukunkii Mingisti, run ahaantii anigu waan garan waayay siday u fikirayaan dadkaasi, laakiin waxaad moodaa inay aqoon la’aan ka keenayso sidaas oo ay iska sheegayaan waxaysanba ka warhaynin waxaa xaqiiq ah oo iska cad in Itoobiya ay cadaw inootahay noocay doontaba ha noqotee, waxa ay biladaha isku siiyaana ay tahay hadba sida ay ula dagaalamaan umada Soomaaliyeed.
Madax-waynihii hore ee Itoobiya “Mingeste Xayle Maryan” mar uu la hadlayay golihiisi baarlamaanka wax yar ka hor intuusan cararin, wuxuu yiri;- “Guusha ugu wayn ee aan u soo hoyiyay dalka Itoobiya waa inaan burburiyay dawladii Soomaaliyeed oo aan dib danbe loo arki doonin dawlad Soomaaliyeed”.
Waxaa laga yaabaa inay in badan oo soomaali ah is waydiiyaan faa’iidada ugu jirta Itoobiya burburinta Soomaaliya, inkastoo ay jiraan dad badan oo fahamsan waxa ay Itobiya tahay iyo cadaawada ay u hayso umada Soomaaliyeed hadana bal aan sharaxaad dheer ka bixiyo faa’iidada Itoobiya ugu jirta burburka Soomaalida.
1- Itoobiya oo ah dawlad Kirishtaan ah kuna dhex jirta jasiirad Muslim ah oo intay Muslimiintu midnimo iyo walaanimo ku suganyihiin ay Itoobiya noloshu cidhiidhi ku tahay.
2- Dalka Itooobiya oo ah sadex meelood meel iyo badh dhulkii dawladii Islaamka ahayd ee Harar (Adari) fadhiyi jirtay laga dhacay iyo shacabka Itoobiya oo 75% Muslimiin ah kuna jira gumaysi nooca ugu xun oo markaa hadii ay Soomaaliya sii dhisnaato laga baqayo inay raadiso dhulka Muslimiinta ka maqan shacabkana kiciso, sida dagaalkii 1977 ee (Ogaden war).
3- Itoobiya oo aan xeeb lahayn gacantoodiina ay ka baxday xeebihii Muslimiinta Eretareya “Marka waxaa qasab ku ah inay raadsadaan xeebo kale” Taasna waxaa lagu heli karaa jiritaan la’aanta dawlad Soomaaliyeed.
4- Inta ka sokaysa qabsashada xeebaha waxay ku talo jiraan inay helaan waxyaalaha ka soo daga dakadaha Soomaaliyeed ee aan dawlada lahayn, sida Xamar, Boosaaso, Kismaayo iyo Berbera, kuwaasoo wakhtigan xaadirka ah wixii ka soo daga ku gala canshuur la’aan gudaha Itoobiya.
5- In suuq xor ah oo aysan dawladi maamulin loo helo ka dhoofinta maandooriye yaasha sida Khamriga, Xashiishka iyo Qaadka iwm.
6- In bulshada Soomaaliyeed laga baabi’iyo dhaqanka fiican iyo akhlaaqda, hoosna loo dhigo xaaladooda caafimaad oo cudurada xun-xun ee aan dawada lahayna lagu faafiyo sida “AIDS” duulaamada ay Itoobiya ku soo qaado umada muslimka ah ee Soomaliyeed waxaa gacan xoog leh ku siiya dawlado shisheeye sida China, Ingiriis iyo Maraykanka.
Waxaan qormadaydan ku soo gabagabaynayaa waa inay umada Soomaaliyeed isu kaashato wanaaga iyo khayrka, cadawgeedana ka hortimaado oo dalkooda iyo diintooda ka daafacdaan, waxaan kaloon ugu baaqayaa inay ka hortagaan midka doonaya inuu dilaalo dadka iyo dalka Soomaaliyeed, waligiina yaysan idin murginin daba dhilifka iyo gumaysi raacaha doonaya inuu dhulka Soomaaliyeed ka iibiyo gumaysiga soo jireenka ah ee Itobiya.
DHAGEYSO:- Waa maxay cudurka kaduudiye, Maxaase lagu Daweeyaa